मिशन आम्बेटकर नेपालले राज्यसत्ताबाट बिभेदमा परेका समुदायको पक्षमा ओकालत गर्छ : अध्यक्ष जैगडी — Motivatenews.Com
मिशन आम्बेटकर नेपालले राज्यसत्ताबाट बिभेदमा परेका समुदायको पक्षमा ओकालत गर्छ : अध्यक्ष जैगडी
असोज ११ ,लम्की – नेपालमा रहेका दलित ,जनजाति,मुस्लीम,आदिबासिको पक्षमा ओकालत गर्दै समुदायको प्रतिधित्व स्थायित्व गर्नको लागी मिसन आम्बेटकर नेपाल कुनै ठाउँमा नचुक्ने मिसन आम्बेटकर नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मनोज जैगडीले बताएका छन् । हामी संग कुराकानी गर्दै भन्नु भयो ः ‘‘शिक्षित बनौ,संगठित हौ,संघर्ष गरौ‘‘ भन्ने बाबा साहेब डा. आम्बेटकरको बिचार धारालाई आत्मसाथ गर्दै मिसन आम्बेटकर नेपालले जातिय रुपमा पछाडी पारेका देशका कुनै पनी निकयमा प्रतिनिधित्व नभएको दलित ,जनजाति,मुस्लीम,आदिबासिको पक्षमा दर्बिलो आवज उठाउदै आएको सबैलाई अवगत नै छ । अहिले पनि हामी यसै अभियानमा नै छौ ।
यहि असोज १४ गते काठमाण्डौमा बृहत राष्ट्रिय सम्भेलनको आयोजना हुदैछ, यो सम्भेलनबाट मिशन आम्बेटकर नेपालले केही नयाँ मोड समेत लिने उल्लेख गर्नु भयो । नेपालको संबिधानको पानामा जातिय रुपमा बिभेद गर्नु हुदैन ,समान अधिकार सबैको हो भनेर लेखिएको छ तर किन संबिधान मै उल्लेख गरिएका कुरालाई नै लत्याउदै दिन प्रतिदिन यस्ता बिभेदका घटनाहरु घट्दै छन ? यसको सार बुझिन्छ की यो समुदाय राज्य सत्ताबाटै बिभदमा छ । खै त अहिले सम्म यस्ता बिभेतकारीे ब्रामणबादी चिन्तनले ग्रसित ब्यक्तिहरुलाई कारबाही भएको ? नेपाल एकिकरण र १० बर्षे जनआन्दोनको ईतिहासलाई नियाल्ने हो भने यि समुदायका धेरै सपुतहरुले अग्रपंतिमा रही लडेर ज्यानको आहुती दिएका छन ।
तर राज्य सत्ता प्राप्ति पछि भने उनिहरुलाई उपेक्षीत गरेर प्रतिनिधित्व बिहिन बनाएको कुरा पनि हामीले बझेका छौ । के यो समुदाय राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,डिआईजी,आइजिपि बन्नै नसक्ने हो त, कारण समुदायलाई अछुत मानिएको छ । प्रतिनिधित्व कसैले स्विकार्न सकेका छैनन । यसको डटेर सामान गर्न कै लागी मिशन आम्बेटकर नेपालको जन्म गर्नु परेको अध्यक्ष जैगडीले जानकारी दिनु भयो । नेपालमा ६० लाख भन्दा बढी अछुत भनिने समुदाय रहेको छ ।
यो समाजलाई बदल्नकै लागी भए पनि जनसंख्याको अधारमा राज्यसत्ताले अधिकार दिनु पर्छ । यो समुदायलाई भोटिङको रुपमा प्रयोग गर्ने र नेतृत्व ल्याउदा अर्काेको ल्याउने परिपाटीको पनि जरैबाट अन्त्य हुने बिश्वास ब्यक्त गर्नु भयो । मिशन आम्बेकर नेपालले नेपालका प्रायः सबै जसो जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रमहरु गरिसकेको छ । मिसन आम्बेटकर नेपाल भनेको कुनै राजनिक पार्टि,संघ संस्था नभएर देशलाई परिवर्तन गर्ने एउटा अभियान मात्र भएको बदाउदै भन्नु भयो ः धेरैलाई लाग्न सक्छ ६० लाखको भिडमा एक जना मात्र किन यो समुदायको अधिकारका लागी लड्दै छ ।
केही न केही ब्यक्तीगत स्वार्थ अनिवार्य हुनु पर्छ । हो मेरो स्वार्थ छ, तर ब्यक्तिगत हैन म पनि एक बिभेदमा परेको मान्छे मलाई पनि अधिकार चहिएको छ । त्यहि अधिकार प्राप्तीका लागी देश ब्यपि रुपमा शान्तीका प्रतिक गौतमबुद्ध र बाबा साहेब भिम राव डा.आम्बेटकरको बिचराधारालाई आत्मसाथ गर्दै अभियानलाई तिब्रता दिएको बताउनु भयो । जव सम्म देशमा बर्षै देखि बिभेदमा पिल्सिएको यो समुदायको राज्यसत्तामा नेतृत्व हुदैन तव सम्म मिशन आम्बेटकर नेपाल अधिकार प्राप्तिका लागी लड्ने प्रतिबद्धता गरे ।